MANCHESTER OO XAQIIJIYISAY HANASHADA KOOBKII 18 EE HORYAALKA INGRIISKA | Toggaherer's Weblog
INAN YAR OO SOOMALIYAD 8 SANO JIR AH OO CUNSURIYAD AWGEED TAREEN LOOGA TUURAY FINLAND
MANCHESTER OO XAQIIJIYISAY HANASHADA KOOBKII 18 EE HORYAALKA INGRIISKA
Posted by: toggaherer on: May 17, 2009
Kooxda Manchester ayaa xaqiijiyay maanta inay ku guuleysteen koobkii 18aad ee horyaalka ingariiska, iyadoo koobkii sedexaad ee isku xiga ay ku guuleysteen kooxdan ka dib ciyaartii ay bar baraha kula galeen maanta kooxda Arsenal.
Manchester ayaa ku dabaal degtay garoonkeeda Old Trafford hallkaasoo taageerayaashii ugu badanaa ee kooxda Manchester ay ku soo xaadireen madaama ay hal dhibic oo kaliya ay u baahnaayeen waxaana dhibicdaasi ay ka heleen kooxda Gunners oo ay ku marti qaadeen garoonkooda.
Fursado ayay qasaariyeen labada kooxood intii ay ciyaartani socotay waxaana aheyd inay ku dhamaato ciyaar goolal la iska dhaliyo, iyadoo ciyaaryahan Tevez oo helay line up inkastoo la bedelay uusan ku faraxsaneyn taaso cadeyn karta inuusan sii joogi doonin kooxda wuxuuna macsalaameeyay taageerayaasha kooxda markii la bedelayay.
Manchester ayaa laga yaaba inay ku soo laabato jagada ah kooxda adduunka ugu fiican waxaana haatan ay gacanta ku dhigtay horyaalka waxaana finalka ka joogtaa ciyaarta koobka horyaalada qaarada yurub oo ay wada kulmi doonaan kooxda Barcelona.
Manchester ayaa waxaa u hadhsan hal kulan oo ay la ciyaari doonaan kooxda Hull city lakiin kulankaasi wax muhim ah uguma fadhiyo sababtoo ah waxay xaqiijiyeen inay koobka qaadeen, waxaana kaalinta labaad hada ku jirta kooxda Liverpool oo labo kulan u hadhsan tahay kaasoo mid ka mid ah ay berri la ciyaari doonto kooxda Westbrown w. albion, iyadoo kulanka labaad ee u danbeeyay ay la ciyaari doonto.
Kooxda Manchester United ayaa haatan waxa ay la siman tahay kooxda liverpool oo iyadana hore u heysatay 18 koob oo horyaalka ingriiska inkastoo kooxda liverpool ay muddo sanando ah aysan haatan qaadin koobkani horyaalka ah.
Qaybta Ciyaaraha ee ToggaHerer